"Fa miomana hanao izay mahamendrika izahay, tsy eo imason'ny Tompo ihany, fa eny imason'ny olona koa." 2 Kôr.8:21
Eo amin’ny fandraharahana rehetra, dia natao hamela ny mazava hamirapiratra tanteraka isika. Tsy tokony ho hita eo velively ny fanambakana. Ny zavatra rehetra dia tokony hatao amin’ny fahatokiana hentitra indrindra. Aleo manaiky ny fatiantoka toy izay hahazo vola kely amin’ny fanambakana. Tsy ho maty antoka na oviana na oviana anefa isika amin’ny farany raha marina eo amin’ny fifanarahana rehetra atao. Natao hiaina ny lalàn’Andriamanitra eo amin’ny tontolo misy antsika isika, ary ho tanteraka eo amin’ny toetra araka ny fitoviana amin’Andriamanitra. Ny varotra rehetra, na miaraka amin’ny mpiray finoana na ny tsy mpiray finoana amintsika, dia tokony hatao araka ny fitsipika marina sy mahatoky avokoa. Ny zavatra rehetra dia tokony ho hita araka ny fahazavan’ny lalàn’Andriamanitra, tsy misy fitaka, na lainga na hafetsifetsena kely monja. – SDABC, 3:1158.
Nanaiky nivarotra ny tenany tamin’ny ratsy i Akana noho ny kapôty tsara avy any Babilôna sy ny volafotsy ary ny volamena tsy misy vidiny. Nitondra ny ozon’Andriamanitra teo amin’ny fanahiny izy tamin’ny nanaovany izany, veriny ny maha-tompom-pananana sarobidy azy tao Kanana, veriny ihany koa ny zava-tsoa rehetra mety ho azy any amin’ny hoavy ary ny lova tsy mety levona any amin’ilay tany vaovao. Novidiny lafo tokoa izany tombom-barotra azony tamin’ny tsy fahamarinana izany! – ST, 5 May.
Aoka isika ho mahatoky sy ho marina amin’ny zavatra rehetra atao eto amin’ity tontolo ratsy misy antsika ity. Misy olona izay mahatoky rehefa hitany fa tsy hampidi-doza ny tombontsoany eto an-tany izany fahatokiana izany. Hofafana tsy ho voasoratra ao amin’ny bokin’ny fiainana anefa ny anaran’izay rehetra manaraka izany fitsipika izany.
Tsy maintsy kolokoloina ny fahatokiana marina. Indray mandeha ihany isika no eto amin’ity tontolo ity ka tsy afaka ny hiverina indray hanamboatra ny fahadisoana vitantsika. Noho izany dia tokony ho feno fahatahorana an’Andriamanitra sy fiheverana feno fitandremana isika eo amin’ny fihetsitsika rehetra.
Rehefa manambara ny firavany Andriamanitra, dia ny marina sy ny mahitsy ary ny mahatoky no hofidiny ho haren-tsarobidiny. Manomana satroboninahitra ho an’ny tahaka izany ny anjely ka hisy fahazavana avy eo amin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra handefa ny taratr’ireo diadema feno vatosoa tahaka ny kintana ireo. – RH, 29 Desambra 1896.